(Redirected from Zvindeya)
Chindeya (Chirungu: Planet) kana zvindeya, muzvidzidzo zvinoti: taranyika; jekanyika; fundoyetsimba, izita rinomirira mitumbi inopoterera zuva. Nyeredzi imwe neimwe ine boterero rainofamba mariri ichipoterera zuva.
Zvindeya zvinosanganisira mitumbi inoti: Nyamatsatse (Mercurius); Hweva (Venus); Rinopasi (earth); Murongazuva (Mars); Vhenekeratsvimborume (Jupiter); Chiremera (Saturnus); Yuranisi (Uranus) neNeputoni (Neptunus). Idzi ndizvo zvindeya zvine maboterekwa anopoterera zuva ratinoona rinobuda nokunyura panyika yatigere. Kubatanidzwa kwezvindeya idzi pamwe nezuva kunodanwa muChishona kunzi Mutandiro weMushana (kana 'solar sytem' muChirungu) iro shoko rokuti mushana richimirira zuva ratinozambira panyika.
5 Ngano neMazita
Zvindeya (Chirungu: 'Planets'; 'revolving object') kana Chindeya izita rino mirira mitumbi dzemuchadenga dzino poterera Zuva. Zvindeya zvinodanwa nemazita akasiyana seNyenyedzi (stars muChirungu), kana Zvichadenga (objects or things of the sky/heaven).
Iro shoko rekuti chindeya rino batanidzirwa nemafundo akasiyana, senhoroondo, as'tiroroji, sainzi nengano (mythology). Pachibviswa chindeya chedu chatigeremo (Rinopasi; kana Eretsi) pane zvindeya shanu zveMutandiro weMushana zvinoonekwa neziso pacharo (ziso risina kupfeka / risina maikiros'kopu). Nekudaro zvindeya izvozvo zvakambo kudzwa zvikanamatwa munhoroondo, kunyanya kuVarungu (Magiriki neMaroma pakazhinji).
Nyanzvi dzekwe Kubatana kwePasirose kweZvechadenga (SS: KPZ; Chirungu: IAU) dzakabvumirana muna 2006 pane tsananguro yezvekuti; chinhu chekudenga chinotorwa sechindeya chinofanhira kunge chichiita zvinhu zvitatu zvakanyora pazasi:
(ii) kana morekiru (molecule) negiravhiti zvakaringana kusvika pachimiro chakaita sedenderedzwa
Muchiverenga rangarirai kuti Mazita ezvindeya muChishona haasati akuzivikwa, ndosaka pachishandiswa mazita eChirungu pamamwe mazita. Zvakadaro, mazita ezvindeya muChishona anowanikwa mutafura iri pazasi:
Zvindeya mu Chishona
Nyamatsatse Nyamasase Mercury Utaridi (Swahili)
Venus Zuhura/Ng'andu (Swahili)
Rinopasi Nyika Earth Dunia (Swahili)
Mars Mirihi (Swhili)
Jupiter Mshtarii (Swahili)
Saturn Zohali (Swahili)
Yuranisi Yuranasi Uranus Uranus (Swahili)
Neptune Neptun (Swahili)
Nyamatsatsi (Chirungu: Mercury)
Hweva (Chirungu: Vhinasi; Venus)
Rinopasi kana Nyika (Chirungu: Earth)
Murongazuva (Chirungu: Maasi; Mars)
Vhenekeratsvimborume kana Vheneka kana Tsvimborume (Chirungu: Jupiter)
Chiremera kana Chirema kana Sotani (Chirungu: Saturn)
Yura kana Yuranisi (Chirungu: Uranus) Zita chairo reChishona harisati rakuzivikwa.
Neputoni kana Nepuchoni (Chirungu: Neptune) Zita reChishona harisati rakuzivikwe.
Pwuto (Chirungu: Pluto) yaive chindeya asi yakabviswa ipapo ikatumidzwa kunzi chindeya chidiki (dwarf planet).
Ngano neMazita[chinja | edit source]
Ngano (Chirungu: mythology(?); folklore; fantasy) inyaya dzisiri chokwadi, kana nyaya dzekare kare kunyanya nyaya dzaitendwa kudhara dzisisa tendwe mazuvano. Mundoto dzeMashona yezve kusikwa kwezvinhu, Hweva ari apakati, iye nemamwe mazita ake ese.
Chitendo cheVashona chakanaka zvekuti, uye Mwari wedu ndiMwari chaiye, taingo muziva wo zvakasiyana neVatorwa.
Zivai kuti Mwari izita reVashona kwete remaKris'to, uye rinoshandiswa wo nevaya Vashona vanonamata chitendero chezvinyakare. Izita raivepo kubva munguva yeHukuru hweDzimbadzamabwe uye, munguva yeUmambo hweMutapa futi. Makris'to vakauya ndokubva vangori shandisa wo muBhaibheri nekuti ndiro raizivikwa neMashona.
Pakutanga, Mwari akasika Mwedzi mudziva rakadzika rinowanzonzi Dzivaguru. Mwedzi akakumbira kugara pasi kwete kuva mumvura. Mwari ari Mwari ane nyasha, uye achida zvaakasika akabvumira kuti Mwedzi agare pasi. Nekudaro, paakangove pasi Mwedzi akasurukirwa, kunyangwe Mwari vakazviona izvi. Mwari pavakaona kusurukirwa kwaMwedzi, vakafunga zvakange zvisina kunaka kuti ave ari ega. Saka Mwari vakatora Hweva (nyenyedzi yekuseni) kubva mudenga vakamutumira pasi kunaMwedzi. Ipapo Hweva akazove mukadzi waMwedzi, asi Mwari vakayambira Mwedzi kuti mushure memakore maviri aifanira kuzomudzosera kudenga. Mwedzi akanzwisisa ndokubvuma. Saka iye naHweva vakagara vese makore maviri, uye panguva iyi Hweva akabereka zvese zvinomera zveRinopasi. Pasina nguva, makore maviri akasvika pakupera uye Mwedzi aifanhira kudzosa Hweva kudzokera kudenga. Mwedzi akazaze kuzviita, asi akadzosa mukadzi wake kudenga sezvaakange arairwa naMwari.
Rangarirai kuti Hweva izita rinomirira chindeya kana nyenyedzi inonzi venus muChirungu.
Hweva paakange aenda Mwedzi akatanga kunzwa kusurukirwa zvekare, uyezve Mwari akanzwa kusuruvara nekuda kwake. Kusuruvara kwaMwedzi kwakakurudzira Mwari kuti vatore kubva mudenga nekutumira Vhenekeratsvimborume (nyenyedzi yemanheru) paRinopasi kuti ave naMwedzi. Uye zvakare zvakare Mwari akaudza Mwedzi kuti achamudzosera kudenga mushure memakore maviri. Mwedzi akabvuma, saka Vhenekeratsvimborume akagara naye. NaMwedzi Vhenekeratsvimborume akazvara, kutanga kuzvirimwa zvinomera zvipuka neshiri, uye akazvara futi vakomana nevasikana. Pakupedzisira, makore maviri akauya, uye Mwari akaudza Mwedzi kuti adzose Vheneka kudenga zvekare. Mwedzi akaramba. Pazuva rakatevera racho, Vheneka akazvara nyama dzinodya dzimwe; se shumba pamwe chete nezvinyavada nezvimwe wo zvikara.
Ratini[chinja | edit source]
Ratini kana Chiratini (Chirungu: Latin), ndiyo inoshandiswa nemimwe mitauro yekuYuropu kagadzirisa mashoko akawanda mitauro dzenyika. Kunyangwe Chirungu chinotora mashoko kubva kuChiratini. MuChiratini Zuva (nyenyedzi) rinonzi 'Sol' uye Mwedzi kana jenaguru rinonzi 'Luna'. Mashoko akaita se 'Solar system' (kubva ku-Sol) ne 'Lunar eclipse' (kubva ku-Luna) anobva kumashoko ekuRatini. Mazita ezvindeya anodanwa sezvakadai:
Rinopasindi-Terra (Mashoko ekuti 'Terrestrial' (MuRinopasi) kana 'extraterresrial' (kunze kweRinopasi) anobva kushoko rinori).
Indo kana Indiya inoshandisa sis'timu yakavakirwa paNavagraha, iyo inosanganisira zvindeya nomwe echinyakare (Surya ndiZuva, Chandra ndiMwedzi, Budha ndiNyamatsatse, Shukra ndiHweva, Mangala yeMrongazuva, Bṛhaspati ndiVheneke, uye Shani ndiChiremera) uye kukwira nekudzika kwemwedzi (ma lunar nodes) kunonzi Rahu(kukwira kwemwedzi) naKetu (kudzika kwemwedzi).
Chayina nedzimwe nyika dzekumabvazuva kweEzhiya munhoroondo pasi pechimiro e tsika dzeChayinisi (senge Japani, Koriya neVhiyetinamu) vanoshandisa zita rekutumidza mazita kubva pazvinhu zvishanu zveChayinisi: mvura (Nyamatsatse), simbi (Hweva), moto (Mrongazuva), huni (Vheneke) uye pasi (Chiremera).
Swahili[chinja | edit source]
Chiswahili inotora mazita ezvindeya kubva kuChiarabhu, ine mamwe mazita anobva kuChiBantu, zvindeya zveChiswahili zviri sezvakanyorwa pazasi.
As'tiroroji[chinja | edit source]
Ma-symbols e zvichadenga zvemu As'tororoji, asi Zuva (sol), Mwedzi (luna) hazvisi zvindeya. Uye, Rinopasi (terra) hirizimo muAs'troroji
As'toroji Zvichadenga neZvindeya.
Zvindeya muAs'tororoji zvinoshandiswa kumirira zvinhu zvakasiyana muhupenyu hwemunhu. Zvimwe zvinhu zvechadenga zvinosanganiswa muAs'tororoji zvisiri zvindeya iZuva ne Mwedzi, uye Rinopasi rinobviswa.
As'tororoji inotanga nezuva yoenda kuMwedzi yozo tanga kutarisa nekutsanangura zvindeya nesimba zvazvinazvo pamunhu nehunhu hwemunhu. Chindeya chimwe nechimwe chine chiratidzo (chirungu: saini; sign) chinobatanidzwa nacho (zvindeya zvinotonga masaini).
Nyamatsatse inotonga masaini maviri Vhego (Virgo) neJemano (Gemeni). Muas'tororoji mekuri inomirira njere (kana pfungwa; 'kuva nemusoro'). Saka inoratidza matauriro anoita munhu, mafungiro emunhu wacho nezvekuti anofunda sei uye zvekuti zvifundo zvinopinda sei muuropi. Nyamatsatse inotaridza magadziriro nemasikiro atinoita zvinhu pachedu, nemafungidziro atinoita. Zvinhu zvakaita sekuti, tinonyora pasi tichifunga here, kana kuti, tinotaura kana tichifunga, uye kana kuti hatifunge zvakakwana kana kuti tinofungisisa, zvese zvinotaridzwa naNyamatsatse.
Mashoko anobatanidzwa neNyamatsatse muas'tororoji:
Mitauro; rurimi (languages)
Chiratidzo kana simboo (symbol) yeNyamatsatse muAs'tororoji
'''Vhego''' (Virgo) - nyenyedzi / saini yeAs'tororoji, inotongwa naNyamatsatse.
'''Jemano''' kana Jemenai (Gemini) yeAs'tororoji inotongwa naNyamatsatse.
Hweva muas'tororoji anotonga nyenyedzi kana masaini maviri, Torisi (Tauras) ne Ribhura (Libra). Muas'tororoji Hweva anomirira runako, tunonaka, nekushamwaridzana. Hweva muchati (chart) yemunhu inoratidza tunhu tunofarirwa nemunhu iyeye nezvinhu zvaanenge achifunga kuti zvakanaka, uye zvinhu zvavanokwezva, uye mapindiro avanoita murudo. Hweva ndevezvemufaro, kuda munhu nekudiwa, kukwezva nekukwezviva, kuroora, ushamwari nekupfava kwemoyo. Uyezve anomirira mari, nekubatanidzwa kwevanhu kana zvinhu / kushanda nevamwe.
Mashoko ezvaHweva muas'tororoji:
Chisiko kana unyanzvi (art; creation; skill)
Chimiriro kana simboo chaHweva muas'tororoji.
Torisi (Taurus) nyenyedzi kana saini yeAs'tororoji inotongwa naHweva.
Ribhura kana Ribhuro (Libra) saini / nyenyedzi yeAs'tororoji inotongwa naHweva.
Murongazuva muas'tororoji anotonga nyenyedzi kana saini inonzi Erisi (Aries). Anomirira chikamu chedu chinoita senge mhuka, hasha dzedu, kuda kwedu kwekukwikwidza nesimba redu rekuita zvinhu tichipedza. Uye shungu, moto urimoyo nekusatya. Madiro anoita munhu chinzvimbo, marwiriro anoita munhu kuti awane chinhu zvese zvinotaridzwa naMrongazuva. Mrongazuva anoita kuti vanhu vanatso shanda, uyeshandiro avo anoratidzwa naMrongazuva futi. Makudziro nekuzvitakura kunoita munhu, nezvese zvebonde zvinotaridzwa naMrongazuva. Ndoosaka Mrongazuva achinzi chindeya cheShungu.
Mashoko ezvaMrongazuva muas'tororoji:
Mrongazuva chindeya cheAs'tororoji.
Chimiriro kana simboo yeMrongazuva muAs'tororoji.
Erisi (Aries) nyenyedzi / saini yeAs'tororoji, inotongwa naMronguzava.
S'kopiyo kana S'kopisi (scorpio) kudhara yaitongwa naMrongazuva.
Nekuti zita raVhenekeratsvimborume rirefu, richashoteswa kunzi: Vheneke kana kuti Tsvimborume.
Muas'tororoji anotonga nyenyedzi kana saini rinonzi Sajiterisi (Sagittarius). Pamusoro pezvo anomirira tariro, kuvimba nekukura kwemunhu. Inoratidza kuti munhu anowana mufaro ne chirongwa chohupenyu sei, uyezve anotaridza kuti ndepapi muhupenyu hwemunhu pavano vana rombo rakanaka. Zvakadaro, Vheneke anotaridza kufunda kwemunhu, mafungiro makuru, kunamata, uchenjeri nenjere dzemunhu. Kubudirira newana kwemunhu, kufamba nyika, uye Vheneke mutongi. Anoratidza hupfumi futi.
Mashoko ezveVheneke muas'tororoji:
Chimiriro kana simboo yaVheneke muAs'tororoji.
Sajiterisi (Sagittarius) inyenyedzi kana saini rinoshandiswa muAs'tororoji uye rinotongwa naVheneke.
Paishisi (Pisces) imwe nyenyedzi inoshandiswa muAs'tororoji, uye yaimbotongwa naVheneke.
Muas'tororoji anotonga nyenyedzi kana saini rinonzi Kapurikoni (Capricorn). Pamusoro pezvo anomirira chirango, kudzorwa / kurambidzwa muhupenyu, mutemo uye anoreva chokwadi. Inomirira zvipingamupinyi futi nebvuvano (ma-responsibilities) dzemunhu, maitiro avanoita zvinhu zvakakosha. Chiremera anotaridza mabatiriro anoita munhu zvinhu zvakokasha futi. Chiremera mufundisi (kana mudzidzisi) uye anomirira vaye kana zvinhu zvine simba kwatiri kana zvakakudzwa.
Mashoko ezvaChiremera muas'tororoji:
Chimiriro kana Simboo yaChiremera muAs'tororoji.
Kapurikoni (capricorn) nyenyedzi kana saini rinoshandiswa muAs'tororoji, uye inotongwa naChiremera.
Akwarisi (Aquarius) nyenyedzi kana saini inoshandiswa muAs'tororoji. Kare yaitongwa naChiremera.
Muas'tororoji Yuranisi anotonga chindeya chinonzi Akwarisi (Aquarius). Pamuso pezvo anomirira shanduko kana kuva nezano isina kurongerwa. Zvinhu zvisingatarisirwi kana kurongerwa. Muchati yemunhu Yuranisi anoratidza nguva inoitika kana yakaitika zvinhu zvakange zvisina kurongerwa. Yuranisi anoratidza kuva nepfungwa yakavhurika. Yuranisi ndeye zvinhu zvese zvizve rusununguko, nyika yese, kubatsirana, kuva nemutsa / tsitsi.
Mashoko ezveYuranisi muas'tororoji:
Chimiriro kana Simboo yeYuranisi muAs'tororoji.
Akwarisi (Aquarius) inyenyedzi inoshandiswa muAs'tororoji uye inotongwa naYuranisi.
Neputoni muas'tororoji anotonga nyenyedzo kana saini rinonzi Paishisi (Pisces). Neputoni anomirira ndoto nengano muhunhu hwedu (nyangwe muhupenyu hwedu). Pamusoro pezvo anomirira zviroto, manzwiro (kana intuition) nefungidziro dzedu (kana imagination). Uyezve, inomirira zviroto zvemunhu kuzvinyepera (delusions) kwemunhu - nepavane unyanzvi hwekusika. Mafungiro asiri mubhokisi uye mafungiro asina kudzorwa. Nhetembo, mhanzi, nekutamba zvese zvinhu zvechisiko zvinoratidzwa naNeputoni, uye kuzarirwa nemanzwiro.
Mashoko ezveNeputoni muas'tororoji:
Chimiriro kana Simboo yeNeputoni muAs'tororoji.
Paishisi (Pisces) inyenyedzi kana saini inoshandiwa muAs'tororoji, uye inotongwa naNeputoni.
Pwuto chindeya chidiki, uye muas'tororoji chinotonga saini rinonzi S'kopiyo kana S'kopisi (Scorpio). Pwuto anomirira simba nekukwira mumaitiro, uye inoratidza mashindiro anoita munhu simba raanaro, kuchinja kwatinoita muhupenyu. Pwuto rinomirira rufu nekuzvarwa futi (rebirth). Pwuto ndeye kuzvidzora muhupenyu, anomirira kupara kwezvinhu, kubatikana neshungu. Pwuto anoti "zvekare zvoenda zvitsva zvopinda", uye unofanhira kugadzirira zvinoteera zvacho.
Mashoko ePwuto muas'tororoji:
Chimiriro kana Simboo yePwuto muAs'tororoji.
S'kopisi (Scorpio) kana S'kopiyo inyenyedzi kana saini indoshandiswa muAs'tororoji, uye inotongwa naPwuto.
Chiswahili[chinja | edit source]
MuChiswahili (kana Kiswahili), shoko rekuti Sayari rinoreva kuti Chindeya.
MuChigwere (kana Lugwere), shoko rekuti Senendo rinoreva kuti Chindeya.
Mazulu vanoti indonsakusa (Jupita ) vachireva hweva.
MaZulu vanoti indonsamasuku' (Jupita, chirevo; 'chinounza mambakwedza) vachireva hweva.
Chirotse[chinja | edit source]
Barotse (kana Silozi) vanoti Lilungwe (n. Hweva - nyenyedzi yekuseni). Kune rimwe izwi rokuti Sikupamulalelo.
Chilingala[chinja | edit source]
MuChilingala (kana Lingala) vanoti Monzɔ́tɔ mwa malíli vachireva kuti Chindeya.
Chiganda[chinja | edit source]
Chiganda (kana Luganda) vanoti Alina embugo bbiri vachireva kuti Chindeya.
↑ 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 Labyrinthos, 27 Ndira 2018, 'Chirevo cheZvindeya muAs'tororoji, Chimiriro cheChindeya neBepa reKubiridzira', Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Astrology.com, h.z, 'Zvindeya',funda. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 12.0 12.1 Astrology.com, h.z, 'Mekuri: Chindeya cheKutaurirana' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021.
↑ 13.0 13.1 Astrology.com, h.z, 'Hweva: Chindeya cheRudo neMari', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 14.0 14.1 Astrology.com, h.z, 'Mrongazuva: Chindeya cheShungu' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 15.0 15.1 Astrology.com, h.z, 'Jupita: Chindeya cheRombo rakanaka' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021.
↑ 16.0 16.1 Astrology.com, h.z., 'Sotani: Chindeya cheKhama' Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 17.0 17.1 Astrology.com, h.z, 'Yuranasi: Chindeya chePanguko', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 18.0 18.1 Astrology.com, h.z, 'Neputoni: Chindeya cheZvisipo', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
↑ 19.0 19.1 Astrology.com, h.z, 'Puruto: Chindeya cheSimba', Zvindeya. Yakatariswa: 6 Chikumi 2021
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chindeya&oldid=86441"
This page was last edited on 9 Chikumi 2021, at 10:24.